Dhageyso: Waa Kuma Madaxweyne Max’med Cabdullaahi Farmaajo? – Calamada.com
Dhageyso: Waa Kuma Madaxweyne Max’med Cabdullaahi Farmaajo?
Â Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo heysta Dhalashada Dalka Maraykanka ayaa xalayloo doortay madaxweynaha Dowladda Federaalka ee afarta sano soo socota.
Waxa uu kamid ahaa in ka badan 20 Musharax oo tartan adag la galay Madaxweynihii horre Xasan Sheekh oo isku heystay inuu sii fadhin doona kursiga.
Qoraal uu Taariikh nololeedkiisa kaga waramay ayuu Farmaajo ku sheegay inuu ku dhashay Caasimada Muqdisho sanadkii 1962-dii. Waxa uu dugsiga dhexe uga baxay iskuulka 1-da Luuliyo, kan sarena wuxuu ku qaatay dugsigii farsamada gacanta ee Lafoole.
Faramaajo waa aqoonyahan inta badan noloshiisa ku soo qaatay qurbaha, gaar ahaan dalka Maraykanka.
Waa nin ay ku weyntahay fulinta danaha Maraykanka oo muddo dheer uu daganaa magaalada New York.
Waxaa la xasuustaa xiligii reysulwasaaraha uu ka ahaa Dowladii Shariif Sheekh Axmed inuu si cad uu usheegay in Soomaaliya uu ka difaacayo Dalka Maraykanka,Â Shaqooyin kala duwan ayuu kasoo qabtay Dalka Maraykaanka.
Halkan Ka Dhageyso Warbixinta Taariikhda Farmaajo.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 12-05-1438 Hijri.
Next: Qarax Ka Dhacay Degmada Beledweyne Ee Gobalka Hiiraan.
3 thoughts on “Dhageyso: Waa Kuma Madaxweyne Max’med Cabdullaahi Farmaajo?”
Fadlan muqalka ama maqalka uu kudhahay farmajo ” dagalka xamar waxan kudifacena newyork ” soo dhiga page-ka si dad badan ay u fahman ujeedka farmajo oo ay hada ugu simantahay taageero biduni ayyi sabab…………….
Fadlan hadalka farmajo ee ah ” dagalka xamar waxan kudifacena NewYork ”
Muqal ama vedio kakena kuna soo qora page-ka si dad badan u fahman halista ninkan oo ay ugu simantahay taageero biduni ayyi sabab……
cafwan dhowr meelood baan khalday waxaan arkay bostigareeyey.
waxaa wax la iga waydiiyey sidee u aragtaa, xukunka ay xerada AMISOM dhexdeeda kula kala wareegeen Farmaajo iyo Gurguurte?
markaasaa waxaa igu soo dhacday ORAAHDII Barkhad Cas uu yiri, markii dagaalkii 2aad adduunka, uu Ingiriisku ka guulaystay talyaaniga iyo jarmalka baa odaga lagu yiri, kaalay oo ka gabay guusha dowladdeena (gumeystaheena) oo ammaan!!!.
ka dibna wuxuu ku jawaabey:-
bal maxaan 2 gaal oo abtirsiinyo gudboon midna aan u gumeyn midna guusha u siin? kol haddaan gurigayga garneylo loola tageyn, London baa gubaneysa iyo Rooma baa gam`i weydey, maxaa iiga gidhiisha?
Markaasaan aniguna anoo dheeganaya (koobiyeyna) tixdiisii, waxaan iri 10 jumladood oo 9 aan anigu leeyahay:-
1-bal maxaan laba gaal, oo abtirsiinyo gudboon, midna aan u gumeyn midna guusha u siin?!!!
2-gurguurtaa laga qaaday, farmaajaa ka guddoomey, iyo geedi baa daba taagan, bal maxaa nooga gidhiisha?!!!
3-nimankaan gebigood uhuuraa garab taagan, yugaandhaa galbinaysa iyo gabre bow talinaaya, bal maxaa nooga gidhiisha?!!!
4-kol hadduu gayigeena iyo diinta uu gadanaayo, shabaabna uu gam`i waayoo, gantaallo uu cabbaystay, nafta ay ka galaafan, maxaa nooga gidhiisha?!!!
5-shacabkuu bar gumaaday, barna gaajo u laayey, haddii aanay garwaaqsan, iyagaa gocondoonee, mar kalay ka gadoone, maxaa iiga gidhiisha?!!!
6-shacabkuu guryahoodiyo dhammaantood gubidoono, gaalana uu u adeegsan, haddii aysan gargaarsan, oo shabaab garabsiin, iyagaa la gumeyne, maxaa iiga gidhiisha?!!!
7-ummadduu mar go`doonshoo, farmaajo gaajo u laayey, shabaabna uu u gargaaray, biyiyo caano u geeyey, raggii geela la siiyey, haddii aysan garoowsan, gurmadkiina la waayo, gor`doon waa sugayaane, maxaa iiga gidhiisha?!!!
8-sheekhaan diintu galaynin, hadduu gaal u fadwoodo, nasaaro uu gacan siiyo, mimbarra uu ka gobaadsho, murtadiinta garqaado, hadduu naar u galaayo, giniyo loogu yaboohay, asagaa guban doonee, maxaa kaaga gidhiisha?!!!
9-iyagoo garanaaya, xer gumeyste u yaacdoo, maskaxduu ka gumeystoo, galaba meel u jiheeyo, goorta uu mid u dooro, guul dhan bay u arkaane, waa ICTISAAMKA gaddoode, maxaa nooga gidhiisha?!!!!
10-shuyuukhdii la lug gooyoo, AMISOM la dhex geeyey, markay meel xun ka gaadhay, qalbigaa gadgadoomoo, laabtu way gubataayoo, habeenkii gama`ayaanoo, galin may tukadaane, gabre maanta shaxaadaa, niyaddooda ka guuxdoo, ginina maalin ma siine, naar uun bay la galeene, maxaa nooga gidhiisha?
ha ila yaabina!, waayo waxay iga maraysaa meeshay barkhad cas ka mareysey taqriiiban 100 sano, ka hor.
haddaan awoodo cod ahaana waa idiinku soo gudbin lahaa, laakiin waa tix sahal loogu luuqayn karee adinkuba ku luuqeeyaa, aniga xaggayga waad ka fasaxan tihiin, laakiin marka hore waa in komentiga laga saaro, haddii aad habeyneysaan.